Android မွာ Screenshot အရွည္မ်ားကို ဘယ္လို ရိုက္မလဲ ? – DigitalTimes
Android မွာ Screenshot အရွည္မ်ားကို ဘယ္လို ရိုက္မလဲ ?
Samsung Galaxy S9 ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ခ်က္တစ္ခုမွာ ၀က္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုလံုးကို Scroll ျပဳလုပ္၍ Screenshot ရိုက္ကူးေပးႏုိင္တဲ့ Scroll Capture ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ဖုန္းမွာ အဲဒီလို စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ိဳး မပါရင္ ၀က္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုကို ရိုက္ကူးထားတဲ့ စကရင္ေရွာ့မ်ားကို တစ္ပံုထဲအျဖစ္ ေပါင္းစည္းေပးတဲ့ Apps မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္ကိုယ္တိုင္ ေပါင္းစည္းေပးရတဲ့အတြက္ အလုပ္ပိုပါတယ္။ ဒီ Tutorial မွာေတာ့ Galaxy S9 ရဲ႕ Scroll Capture လို စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ိဳးကို သင့္ Android မွာ သံုးႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းကို ေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Samsung က Note5မွာကတည္းက ၀က္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုကို Scroll ျပဳလုပ္၍ စကရင္ေရွာ့ ရိုက္ကူးေပးႏိုင္တဲ့ Capture More စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ ဒီစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ိဳးကို Samsung Galaxy S9 မွာ ျပန္လည္ ထည့္သြင္းေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီလို စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ိဳးကို ေရွာင္မီနဲ႔ အျခား စမတ္ဖုန္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားရဲ႕ ဖုန္းမွာလည္း ထည့္သြင္းေပးထားတတ္ၾကပါတယ္။ သင့္ဖုန္းမွာ ဒီလို စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ိဳး မရွိရင္ေတာ့ Stitch & Share App ကို သံုးႏုိင္ပါတယ္။
Android မှာ Screenshot အရှည်များကို ဘယ်လို ရိုက်မလဲ ?
Samsung Galaxy S9 ရဲ့ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ချက်တစ်ခုမှာ ဝက်ဆိုက် စာမျက်နှာတစ်ခုလုံးကို Scroll ပြုလုပ်၍ Screenshot ရိုက်ကူးပေးနိုင်တဲ့ Scroll Capture ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဖုန်းမှာ အဲဒီလို စွမ်းဆောင်ချက်မျိုး မပါရင် ဝက်စာမျက်နှာတစ်ခုကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ စကရင်ရှော့များကို တစ်ပုံထဲအဖြစ် ပေါင်းစည်းပေးတဲ့ Apps များစွာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ကိုယ်တိုင် ပေါင်းစည်းပေးရတဲ့အတွက် အလုပ်ပိုပါတယ်။ ဒီ Tutorial မှာတော့ Galaxy S9 ရဲ့ Scroll Capture လို စွမ်းဆောင်ချက်မျိုးကို သင့် Android မှာ သုံးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Samsung က Note5မှာကတည်းက ဝက်စာမျက်နှာတစ်ခုကို Scroll ပြုလုပ်၍ စကရင်ရှော့ ရိုက်ကူးပေးနိုင်တဲ့ Capture More စွမ်းဆောင်ချက်ကို ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ဒီစွမ်းဆောင်ချက်မျိုးကို Samsung Galaxy S9 မှာ ပြန်လည် ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလို စွမ်းဆောင်ချက်မျိုးကို ရှောင်မီနဲ့ အခြား စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူများရဲ့ ဖုန်းမှာလည်း ထည့်သွင်းပေးထားတတ်ကြပါတယ်။ သင့်ဖုန်းမှာ ဒီလို စွမ်းဆောင်ချက်မျိုး မရှိရင်တော့ Stitch & Share App ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
သူက စကရင်ရှော့များကို သာမာန်အတိုင်း ရိုက်ကူးပေးနိုင်တဲ့ အပြင် စကရင်ရှော့များ ပေါင်းစပ်တဲ့ အလုပ်ကို အလိုအလျှောက် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အခြား သူ့လို App များမှာတော့ ကိုယ်တိုင် ပေါင်းစပ်ပေးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ဝက်စာမျက်နှာတစ်ခုလုံး၊ ရှည်လျားတဲ့ သတင်း၊ ဆောင်းပါး တစ်ခုလုံးကို စကရင်ရှော့ ရိုက်ကူးပေးနိုင်ပါတယ်။ သူ့ကို Google Play Store ကနေ အခမဲ့ အင်စတောလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အင်စတောလုပ်ပြီးရင် သူ့ကို ဖွင့်ပါ။ Automatic capturing ထဲမှာ လိုအပ်တဲ့ Permissions များကို Enable လုပ်ပေးပါ။
Scroll Screenshot ရိုက်ကူးဖို့အတွက် Automatic capturing ကို တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် စကရင်ပေါ်မှာ Floating Icon လေးပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘရောက်စာ သို့မဟုတ် App တစ်ခုကို ဖွင့်ပါ။ Floating Icon ကို နှိပ်၍ ဝက်စာမျက်နှာရဲ့ ထိပ်ဆုံးကို စကရင်ရှော့ ရိုက်ပါ။ ရိုက်ထားတဲ့ စကရင်ရှော့ကို စကရင်ရဲ့ ဘယ်ဘက်မှာ Floating Image အဖြစ် ပြသပေးထားမှာပါ။ အဲဒီနောက် နည်းနည်းချင်းစီ အောက်ဘက်ကို Scroll လုပ်ပေးပါ။ Scroll တစ်ခါလုပ်ပြီးတိုင်း ခနစောင့်ပေးပါ။ Floating Image မှာ တိုးတက်လာမှ Scroll ထပ်လုပ်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Save Icon ကို နှိပ်၍ ရိုက်ကူးထားတဲ့ စကရင်ရှော့များကို သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။
သူ့မှာ အားနည်းချက် အနည်းငယ်တော့ ရှိပါတယ်။ သူကနေ ဖန်တီးထားတဲ့ စကရင်ရှော့များရဲ့ အောက်ခြေမှာ Watermark လေးကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အခပေး အသုံးပြုမှသာ Watermark မပါရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူ့ရဲ့ Scroll Screenshot စွမ်းဆောင်ချက် ရလဒ်များဟာ တစ်ခါတစ်လေမှာ ပြည့်စုံကောင်းမွန်ခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Samsung Galaxy S8 မှာပါတဲ့ Scroll Capture လို စွမ်းဆောင်ချက်မျိုးကို သင့်ဖုန်းမှာ အသုံးပြုချင်ရင်တော့ သူ့ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Lenovo က အရြယ္ႀကီး တန္ဖိုးနည္း K5 Note ကို ေၾကညာ